Isitudiyo sanamhlanje kwipatio yaseAndalusi, indawo entle! - I-Airbnb
Isitudiyo sanamhlanje kwipatio yaseAndalusi, indawo entle!
Ndinikezela ngesitudiyo esicocekileyo, esiziswe kakuhle kwaye esahlaziywa, esime embindini wedolophu yakudala yaseTarifa (eSpain), edibanisa ukuba kufutshane neevenkile, iindawo zokutyela kunye nokuzola & nokuzola.
Le ndlu yakudala yakhiwa ngenkulungwane ye-19, kwindawo eqhelekileyo yaseAndalusian. Nangona kunjalo, istudiyo sisandul 'ukuhlaziywa kwisitayela samanje kwaye sicoceke kakhulu. Ifumaneka kumgangatho ophantsi wepatio entle nethuleyo, istudiyo sifumaneka kubantu aba-2.
I studio inama-23 square metres.
Ibhedi yesofa ekhululekileyo yabantu aba-2.
Igumbi lokuhlambela libandakanya, isepha yesandla, isomisi seenwele, ukufudumala kwetawuli, iphepha langasese, iitawuli ezicocekileyo zobuso kunye neshawa.
Kukho i-cooktop yombane kunye ne-microwave yokupheka. I-Cutlery, i-crockery kunye ne-glassware, umatshini wekhofi wombane, i-toaster iyafumaneka.
Ukuba ucinga ukuba kukho into engekhoyo, nceda undinike impendulo yakho ukuze ndiphucule inkonzo yam.
4.85 · Izimvo eziyi-121
Kwindawo yokuphumla uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze uhlale ulungile.
Umgama wokuhamba ukuya:
Ivenkile enkulu: 3 min
Isikhululo sebhasi: 5 min
Indawo yokupaka yasimahla: 2 min
Indawo yokupaka kawonke-wonke: 1 min
Iofisi yabakhenkethi: 1 min
Azikho iindawo zokupaka ezabelweyo, kodwa unokufumana indawo yokupaka yasimahla kwisitrato se studio okanye kufutshane.
Indawo yokupaka yoluntu ekufutshane ikuCalle Padre font.
Ndidla ngokufumaneka kwaye ndibhetyebhetye yonke imihla, ukuba unokundidinga.